About Us - Dongguan Xianglin Plastika Product Co., Ltd.
Satroka plastika & fanidiana
Child mahatohitra satroka
Quality dia toe-javatra izay mahatonga ny orinasa tsy compromises.With 100.000 ambaratonga fanadiovana atrikasa ary ny 15.000 metatra toradroa fototra, ny famokarana Output mahatratra 500.000 milentika isan'andro. Namboarina fitoeran-javatra amin'ny nohitsakitsahiko mafana, lamba fanontam-pirinty, dia offerable pating lelafo.
Xianglin hatrany miezaka mihoatra ny mpanjifa 'zavatra andrasana avy amin'ny vokatra na kalitao sy ny mpanjifa. Xianglin tena voaofana miasa solontenan'ny mpanjifa tanana-in-tanana miaraka amin'ny mpanjifa mba hamantarana ny vokatra tsara indrindra ho an'ny ny zavatra ilainy.
Ny ara-teknika be dia be ny manam-pahaizana manana traikefa tanana-teo amin'ny vokatra mpanamboatra isika ary mora azo ny hamaly ny fanontaniana. Ao amin'ny Xianglin, zatra isika manaraka ny miaraka amin'ny mpanjifa mba ho azo antoka 100 isan-jato ny vokatra fahafaham-po.
Easy Ordering - ny safidy
Ny vokatra iray manontolo tsipika tsy ampy noho ny baiko 24 ora isan'andro.
Faly izahay nanonona! Mba andefaso mailaka amin'ny: amy_wen@dgxianglin.com
Fa nandefa vinavina, azafady anirahako serasera: amy_wen@dgxianglin.com
Manaiky 30% petra-bola amin'ny alalan'ny T / T, 70% fifandanjana eo anatrehan'i lahateny.
FOB Shenzhen, na Guangzhou.
Baiko ho an-tsambo 'prepay ary ampio' FOB fandefasana teboka. Raha misy tiany mitondra, azafady mariho izany ao amin'ny 'fanamarihana' faritra ny filaminana. Milaza fa very na simba amin'ny fitaterana dia tokony hatao avy hatrany (ao anatin'ny 30 andro), ary nanamarika ny volavolan-dalàna ny entana.
Raha ny zavatra hita manana visable fahasimbana avy UPS, andefaso olona antsika ao anatin'ny 48 ora ny fanaterana.
Fa entana entana, misy sy tsy fahampiana sy ny fahavoazana rehetra dia tsy maintsy voasoratra ao amin'ny Bill Of entana entana na Bill. Tokony hamaritra fa misy zavatra tsy simba na tsy ampy, tsy maintsy mariho ilay zavatra, ny discrepancy, ary ny toe-javatra eo anatrehanao sonia izany.
Ny fanaovan-tsonia ny nanolotra ny entana mitondra Bill Of entana (Bol) mahaforona ny fanekena ny entam-barotra araka izay tsara sy filaminana. Raha tsy maso alohan'ny hanaovana sonia ianao, fa izay hevitra mahasoa rehetra tanjona, waiving ny zo hanangona amin'ny fahasimbana fitakiana na dia ny fahasimbana dia hita taty aoriana (fantatra amin'ny anarana hoe nafenina fahavoazana).
Zavatra rehetra dia nilan'ny ny mpanamboatra manohitra tsy fahombiazana vokatry ny tsininy fotsiny asa kanto na ny fitaovana. Raha tsy misy fanamarihana voalaza an-tsoratra, ny mpivarotra tsy manao fiantohana fa ny kaontenera, fanidiana, ary misy zavatra hafa voalaza aseho etoana na dia mendrika ho tanjona manokana.
Raha toa ny fiverenana, azafady mitaky ny ara-dalàna clamers.
Zavatra rehetra dia tsy pirinty-returnable. No maningana.